Trump oo William Barr u magacaabey xeer-ilaaliyaha guud ee Mareykanka – XOGMAAL.COM
Trump oo William Barr u magacaabey xeer-ilaaliyaha guud ee Mareykanka
By MN USA	 On Dec 7, 2018
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta xeer-ilaaliya guud ee Mareykanka u magacaabey William Barr oo 68 jir ah, kaasoo beddeli doona xeer-ilaaliyihii guud ee dhawaan shaqadda laga ceyriyey Jeff Sessions.
William Barr ayaa xilkan horey u soo qabtey intii u dhaxeysey sanadihii 1991-illaa 1993-kii xilligaasoo uu dalka Mareykanka madaxweyne ka ahaa madaxweyihii dhawaan geeriyoodey ee George H W Bush.
Xeer-ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee hadda uu magacaabey madaxweyne Donald Trump ayaa la wareegi doono maamulka hawsha baaritaanka ah in Ruushku uu ku luglahaa doorashadii Mareykanka ka dhacday 2016-kii ee ay guushu ku raacdey Trump iyo xiriir la sheegay in uu dhexmarey kooxdaasi iyo dadkii Trump u qaabilsanaa ololaha doorashooyinka.
Madaxweyne Trump ayaa xeer-ilaaliyaha guud ee uu maanta magacaabey William Barr ku tilmaaney nin si weyn loo xushmeeyo oo hawshan ka soo bixi doona.
Dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa sidoo kale Heather Nauert u magacaabey safiirka Mareykanka u fadhiya xarunta Qaramada Midoobey, kaddib markii ay dhawaan xilkaasi ka casishey Nick Helay oo xilkaasi haysey.
Gabdhaha oo la sheeggay inay u badantahay in ay “dareemaan wehel la’an”
Nin looga shakiyey in uu dab qabadsiiyey xaafad oo la diley